Shiinaha PVC xusulka tuuboyinka suurawdo warshad caaryada iyo shirkado cusub. Longxin
PVC xusulka tuuboyinka suurawdo Qaab
PVC 90 ° Degree xusulka suxulka iyo wasakhda tuuboyinka qaabaynta caaryada waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro PVC suumanka rakibida, kuwaas oo ku haboon injineernimada, qurxinta guriga, bullaacadaha, qashinka wasakhda iyo wixii la mid ah
Waxaan nahay naqshad xirfadeed, soo saaridda caaryada caaryada PVC. 15 sano oo waayo aragnimo ah oo ku saabsan caaryada iyo wax taaj oo kale duray.
Asal ahaan: Taizhou, Zhejiang, Shiinaha
Nooc: caaryada PVC
Model: PVC xusulka tuuboyinka suurawdo Qaab
Qaabka wax u qaadista: caaryada la isku duro ee caaga ah
Qalabka wax soo saarka: Birta
Alaabada: Alaabada guriga
Magaca: Shiinaha caag tayo sare leh caaryada PVC caag ah
Godka: 2 godad
Naqshad: 3D ama 2D
Nooca Orodyahanka: orod qabow
Birta dhinta: p20h / 718/2316/2738, iwm
Saldhig caaryada: LKM, HASCO, DME
Nolosha caaryada: 500000
Waqtiga qaadashada: 60-90 maalmood
Midabada: dhammaan midabada
The Main tuuboyinka suurawdo Qaab Steel iyo adkaanta aad tixraac:
Xirxirida Iyo Gaarsiinta
Sidee loo xiraa PVC Tee Pipe Fitting Mold flaring in case alwaax:
Marka hore: Daub miridhku saliid ka hortag ah oo ku saabsan caaryada.
Ta labaad: Waxaan ku xirxiraan caaryada filim caag ah oo khafiif ah si aan uga ilaalino qoyaanka.
Saddexaad: Waxaan filimkan balaastigga ah ku shubnay sanduuq alwaax ah, oo waan hagaajineynaa iska ilaali dhaqdhaqaaq kasta.
Cabbirka xirxirida ee kiiska alwaax: sida ay size cabirka
Port ： Ningbo
Ku Saabsan Mashiinka Mindhicirka duritaanka Caaga
Q1: Miyaad ka dhigi kartaa qoraalka / qoraalka / kuleylka_kuleylka / nitriding ee caagga caaryada kala sooca?
J: Haa, dhib malahan.
Q2: Ma u sameysaa qaybo dayactir ah macaamilkaaga?
J: Haa, waxaan ku siin doonaa qalab dayactir ah haddii loo baahdo.
Q3: Sidee u xirxiraa wasakhaha caaga ah ee Shiinaha?
J: Sanduuqa alwaaxa.
Q4: Haddii aan ku siiyo sawirada 3D ee sheyga, ma sheegi kartaa oo ma sameyn kartaa caaryo sida ku cad sawirada 3D?
J: Haa DWG, DXF, TALLAABO, IGS, iyo faylasha X_T ayaa loo isticmaali karaa in lagu xuso oo lagu sameeyo wasakhahaasi oo ku saleysan qaabkaaga - tani waxay badbaadin kartaa waqti iyo lacag soo saarista qaybo ka mid ah.
J: Waxaan soosaari karnaa dhammaan noocyada wasakhda wax lagu durayo ee caaga ah, PVC, PPR, PE iyo wasakhda kale ee ku xidha tuubbada Waxaan kugula talin karnaa tirada ku habboon ee godadka iyadoo loo eegayo cabirka mashiinka wax lagu duro ee la isku duro
Waxaan u hibeynay naqshadeynta tuubada tuubbada tuubbada iyo soosaariddeeda in ka badan 15 sano.
Hore: PVC Tee tuuboyinka suurawdo Qaab
Xiga: Upvc 45 ° xusulka suurawdo
UPVC Yee Tee tuuboyinka suurawdo Qaab
PPR 45 ° xusulka tuuboyinka suurawdo Qaab